ဇော်ဂျီ ကွန်ဗာတာ၊ ယူနီကုဒ် ကွန်ဗာတာ - မြန်မာ ဖောင့် ကွန်ဗာတာ
ဝင်ရန် အကောင့်ဖွင့်ရန် အခမဲ့ တင်ရန်
English ဝင်ရန် အကောင့်ဖွင့်ရန် အခမဲ့ တင်ရန် Menu
သုံးရအလွယ်ဆုံး ဇော်ဂျီ ↔ ယူနီကုဒ် မြန်မာဖောင့် ကွန်ဗာတာ
ဤဝဘ္ဆိုက္သည္ အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာတင္ႏိုင္ေသာ အိမ္ၿခံေျမ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
မြန်မာ ယူနီကုဒ်၊ ပြည်ထောင်စု၊ မြန်မာ ၃
ဤဝဘ်ဆိုက်သည် အခမဲ့ ကြော်ငြာတင်နိုင်သော အိမ်ခြံမြေ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဇော်ဂျီ - ယူနီကုဒ် ကွန်ဗာတာကို ဘယ်လို အသုံးပြုရလဲ?
အထက်ပါ အကွက်နှစ်ကွက်ကတော့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဖောင့်ပြောင်းပေးတဲ့ မြန်မာဖောင့် ကွန်ဗာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရိုက်ထည့်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ကူးထည့်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဖောင့် တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို ပြောင်းပေးပါတယ်။ မြန်မာ ယူနီကုဒ်ကနေ ပြောင်းချင်တယ်ဆို မြန်မာ ယူနီကုဒ်ဘက်မှာ ရိုက်ထည့်၊ ကူးထည့်လိုက်တာနဲ့ ဇော်ဂျီဝမ်းဘက်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုပြောင်းပြီးသား တိုက်ရိုက်ထွက်လာပါမယ်။ အပြန်အလှန်ပါပဲ၊ ဇော်ဂျီကနေပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဇော်ဂျီဝမ်းဘက်မှာ ရိုက်ထည့်၊ ကူးထည့်တာနဲ့ မြန်မာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကို ပြောင်းပြီးသားက မြန်မာ ယူနီကုဒ်အကွက်ထဲမှာ ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာဖောင့် ကွန်ဗာတာကို အသုံးပြုရတာ ချောမွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို သင့်စက်ထဲမှာ အဲဒီဖောင့်တွေ တစ်ခုမှမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ မြန်မာဖောင့်များ ကို ကျနော်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ ဇော်ဂျီ ဖောင့်၊ ပြည်ထောင်စု ဖောင့်နဲ့ မြန်မာ ၃ ဖောင့်တို့ကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ ဟောက်စ် ဆိုတာဘာလဲ?
မြန်မာ ဟောက်စ် ဆိုတာ အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ငှားခြင်း ကိစ္စတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဖန်တီးထားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေ ရှာဖွေရာမှာ အမျိုးအစား၊ ဈေးနှုန်း၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ တည်နေရာ စတာတွေနဲ့ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေနံပါတ် ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကြိုက်စကားလုံး တစ်ခုခုနဲ့လည်း ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး ကွန်ဒိုမီနီယံ တွေ၊ လုံးချင်းအိမ် တွေ၊ မြေကွက် တွေနဲ့ တိုက်ခန်း တွေဟာ သင့်လက်ဖျားထိပ်မှာ ရောက်နေပါပြီ။ အိမ်ခြံမြေ ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုပြီးတော့ ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေ၊ မန္တလေး အိမ်ခြံမြေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက အိမ်ခြံမြေ အားလုံး ကို အခုပဲ ရှာဖွေလိုက်ပါ။
Copyright © 2020 - 2022. All rights reserved by Myanmar House.
Apartment For Rent in Yangon
House For Sale in Myanmar